CD Series Single Screw extruder dia mihatra amin'ny famoahana fitaovana PP, PE, PETPVC, ABS, PS, PA sns sns.
1.It dia manana boaty fitaovana manokana, ary manana endrika tsy dia mitabataba, mihazakazaka mihazakazaka, manana fahaiza-mitondra avo, androm-piainana maharitra. Fitaovana bobongolo sy fitaovana fanampiana fanampiny. Izy io dia afaka mamokatra fantsona plastika, ravina, takelaka, granula sns. Izy io dia manana endri-javatra amin'ny fizotrany tsotra, avo lenta, tsindry extrusion azo antoka, ary vidiny ambany. Ny clutch dia misy eo anelanelan'ny motera sy boaty boaty, izay ahafahan'ny masinina mifatotra kokoa sy mampihena ny angovo.
Ny seranan-tsambo fanary 2.Vacuum dia omena ho an'ny barika, famolavolana fanodinana visy, raha ampitahaina amin'ny extruder mahazatra, dia nitombo ny asan'ny havizanana sy ny fanoloran-tena.
3.Nasaina ny sehatry ny asa sy ny fampiharana ny visy tokana.
4.Barrel dia mety mangatsiaka amin'ny alàlan'ny mpankafy na rano malefaka, rafitra fanaraha-maso ny mari-pana hafanana, ny fantsom-panafody PID, ny mari-pana tsy miovaova. Hafainganam-pandeha rotary, fanamboarana modely fanodinana volo tokana novolavolaina tamim-pahombiazana, izay manome extruder visy tokana miaraka amin'ny habaka sarobidy kokoa.
Karazana savaivony L / D RPM (max) fahefana Output (kg / ora)
Single screw extruder dia fitaovana fanalefahana hery manokana natao ho an'ny fitaovana plastika sy fingotra tokana extruder. Ny reducer sy ny motera dia miaraka miaraka. Ny faritra ampiasaina dia vita amin'ny vy mahery. Gear dia nohanina amin'ny alàlan'ny fikolokoloana, famonoana ary ny fikoloana nify avo lenta.
Ny extruder visy tokana dia tsotra amin'ny famolavolana ary mora vidy, ka ampiasaina be io.
(1) Ny fitaovam-pamoahana extruder visy tokana dia miankina amin'ny fikorontanana, hany ka voafetra ny fahombiazan'ny sakafo, vovoka, paty, fibre vera ary mpiorina anorganika dia sarotra ampiana.
(2) Rehefa avo ny tsindry amin'ny orona dia mihabe ny mpanohitra, ka mihena ny vokatra.
(3) Ny fitaovan'ny extruder hozatra tokana dia misy fiantraikany kely amin'ny fanavaozana ny velaran'ny faritra fanalefahana, noho izany dia ratsy ny vokany.
(4) Extruder visy tokana dia tsy mety amin'ny fizotrany sasany, toy ny fandokoana polymer, fanodinana vovoka thermosetting, sns.
Teo aloha: Masinina mpanampy
Manaraka: Clam Shell Barrel Miaraka amin'ny Screw Extruder